トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "itanki", iqabane iimvakalelo?
Xa "itanki" isikhundla umva elithetha
zobungcali abaxeli-mathamsanqa ukuya 3500 yen uvavanyo Free ukufumana indlela
Marseille inguqulelo matanki kwekhadi seluzotyiwe kumkani uselula lonke etankini. Yekani isithsaba segolide, kodwa lo kumkani uselula enxibe isikrweqe am kwindlela seNdebe ukubaleka itanki, amavili Wena ziye emacaleni, ukususela izinja ezimbini wehashe ayiluthe izintso, kakhulu kwi itanki akanayo kungenzeka run.
Ke ukumkani abaselula nguwe akalindelanga ukuba indlela sikhathazeke ngayo into enjalo, lo kumkani uselula ungumntu akuqolanga kakhulu, kuye zachazwa ukuba kukho ithuba ephakamileyo ebambe ezinye uhlobo ingxabano. Kunokuba egorheni ukumkani oselula uguqulelo ubunzima ukuba ekhwele phezu amatanki, kuba izinja ezimbini wehashe kuba izinja ezimbini SPHINX, kodwa ukuba ukubonisa ngquzulwano phambi kokuba uthathe inyathelo ngendlela efanayo. Nangona ukuba itanki
of umdlali iimvakalelo amatanki
kwekhadi yobume ezintle ithathwa ukuba ibhekisele kwaphuma nge kwindawo entle na nemeko enzima, ebangela nokuziphatha ndlongo ngokusebenzisa inkolelo ukuba uhambe, oko imele ukuba unako ukufumana ukuqinisekisa iziphumo ezihle. Kwimeko babini Ndicinga abantu, elinye iqela liye Ndandicinga ukuba kuza kuba mnandi kakhulu ubudlelwane kunye nawe. Yintoni eye kugxininiswa kubudlelwane kunye nawe kunokuba, omnye kubonakala ukuba ubuhlobo bakho naye ucinga ngomtshato.
ufuna naphakade ukuba kunye, kunye nemvakalelo endifuna ukuthetha, kuba ingqiqo yokuba ubundlongondlongo kakhulu ngokuphathelele kubudlelwane kunye nawe, uya kuba ecikizekileyo, uye wenza ngokungqinelana kumdlali welinye icala. Kwimeko zabantu ezingabuyekezekiyo uthando iqabane na urhulumente ukuba ukhangela iqabane ufuna uthando.
egqibele zibe banzi ngentlonelo ukuthanda malunga "Ndifuna ukudibana nabantu nice, bade baye! ukuya naphi na ukuze ihlangane", uya ngokukweka unokusebenzisa ukuze umdlali yakhe . Ukuze elinye iqela kubonakala kubantu umdla kuwe, ukhangela ukuba isibheno khazimlisani ezabo Nceda.
iqela iimvakalelo ukuba indawo ngasemva kwiitanki ibimele ukuba lithetha ityala
amatanki yemeko emuva ukuba umphumo obuqukuqela kuhlala ungakhululeki, akusekho phandle kuphela japan embi, ukuba silahle chillin, imele ukuba babe abaziva ngayo abanye. Kwimeko zombini Ndicinga ukuba abantu welinye icala ndiyacinga into ebalulekileyo kuwe; wavuka Sakibashi 'iimvakalelo nje, limela urhulumente akakwazi ukuthatha inyathelo, ezifana baba kunjalo. Ukuba
ufuna ukugcina ubudlelwane kunye nomnye umntu, nceda unike iwotshi kakuhle welinye icala. Kwimeko yabantu uthando ezingabuyekezekiyo kukho iimpawu ezingqondweni kwezinye izinto bebekelwa ngaphezu kothando. Okokuqala, zama ukuba uqhagamshelane njengomhlobo, masilinde kuba xa welinye icala iba imo uthando.